सालीकोष गाउँको परिचय बोकेर रिलिज भयो यस्तो सुन्दर गीत (भिडियो सहित) | Screennepal
सालीकोष गाउँको परिचय बोकेर रिलिज भयो यस्तो सुन्दर गीत (भिडियो सहित)
२०७५, १८ माघ शुक्रबारscreenadminfeature, Music0
हाम्रो देशको हरेक कुनामा आफ्नै संस्कृति लुकेको छ । आफ्नो आफ्नो हिसाबले त्यस ठाउँका व्यक्तिहरुले त्यसको प्रवर्धन र जगेर्ना गरेको पाइएको छ । प्रशंग हो गीत संगीत जसले हरेक क्षेत्रमा प्रभाव जमाउदै आईरहेको छ । अनुभवी र निकै सुन्दर शब्द रचना गर्न सक्ने क्षेमता राखेका गीतकार हुन् निर प्रसाद गुरुङ । उनको धेरै गीत बजारमा आईसकेको छ । अरुले भने केहि नया गर्ने चाह राखेर अगाडी बढ्दै गरेका उनले यसपटक पनि केहि नया नै गर्ने जमर्को गरे । यहि अनुरुप उनले नया गीत बजारमा लिएर आएका छन् ।
गीतले पूर्ण रुपमा एक गाउँको चिनारी र इतिहास संगै संस्कृतिको मिठो बर्णन संगै विश्लेषण समेत गरेको छ । हेर्दा र सुन्दा नै यो आकर्षक र मन मोहक पनि लाग्न सक्छ । गाउँ समाजमा रहेको विशुद्ध संस्कृतिको रक्षा सबैले गर्नु पर्ने र यसलाई देशभर नै परिचित बनाउनु पर्ने सोच गीतकार निर प्रसाद गुरुङले गरेका हुन् । यहि सोच र दृढ संकल्प बोकेर उनि अगाडी बढिरहेका छन् । त्यसको फल स्वरूप नै यो संस्कृति बोकेको ऐतिहासिक गीत बजारमा आएको हो ।
गीत संग जोडिएको उक्त गाउँको बिषयमा केहि कुरा खोलौ । स्याङ्जा जिल्ला, भिर्कोट नगरपालिका वार्ड न. ८ मा अवस्थित सालीकोष गाउँको नाममा यो गीत निर्माण भएको हो । गन्डक क्षेत्रमा रहेको गाउँ चिनारी गीतको सृजना गरेर आ-आफ्नो गाउको पहिचान दिन धेरै समय देखि गाउका बुद्धिजीवी सर्जकहरु लागि परेका छन। यस्तै एउटा सुन्दर गाउँ सालिकोष गाउँ बासिले पनि आफ्नो गाउँ चिनाउनको लागि गीत बनाउन जमर्को गरे र त्यसलाई बजारमा रिलिज पनि गरियो । स्याङ्जा जिल्लाको बयरघारी भन्ने ठाउँमा यातायात साधानबाट झरेपछी पश्चिम तर्फ लाग्दै जाँदा आधिखोला तिरमा पुगिन्छ।
आधिखोला तरेपछि लुब्धिखोलाको तिरै- तिर लाग्दै गए पछि यो सालिकोष गाउँमा पुगिन्छ। दायाँ ढापुक, बायाँ बडहरे गाउँको बिचमा सालिकोष गाउँ पर्दछ। यो गाउँ सानो भए पनि अति सुन्दर देखिने भिर्कोट नगरपालिका वार्ड न. ८ भित्र पर्दछ । गाउँको दायाँ तिर माथि एउटा अति अग्लो लेक छ जसलाई टाँउ-को लेक भनेर चिनिन्छ। यो समुद्री सतह देखि धेरै उचाईमा भएकोले यहाँबाट चारै तर्फको दृश्य हेर्न सकिन्छ। यस सालैजो गीत आफ्नै गाउँ भेक, पाखा पखेरु, खोला- नाला, पहाड- पर्बत, देवी देवतालाई सम्झेर अतिनै मीठो मौलिक शब्द अनि मिठो भाकामा सजाएर गीतकार निर प्रसाद गुरुङले प्रस्तुत गरेका छन।
गीतको लयमा कहि- कतै आधुनिक शैली पनि सुन्न पाईन्छ। यस सालिकोष सालैजो गीतको लगानी खर्च गाउँ समाजकै सदस्य बढी प्रवासबाट गाउँका चेलीबेटीले आफ्नो जन्म गाउँ लसि पनि माया गरेर साथै शुभ- चिन्तकहरुबाट रकम संकलन जुटाएर यो सृजना गरेको बताउछन गीतकार निर प्रसाद गुरुङ। गीतकार निर प्रसाद गुरुङ आफै पनि सालिकोष गाउँको हुनुहुन्छ। यो गीतमा चर्चित गायक नरजंग गुरुङ्ग र गायिका तारा श्रीसले अति मीठो कर्णप्रिय स्वर दिएका छन। यो गीतको एरेन्जर/ मिक्सिङ्ग एल. बी. पुनले गरेका छन।
नायक खेम बहादुर गुरुङ र नायिका शान्ति गुरुङ, नायक गमन घलेलाई कबिता गुरुङले साथ दिएका छन। भिडियोमा कमल गुरुङको नृत्य- निर्देशन, सरोज गुरुङको मेकअप, गोपी गुरुङ र गंगा गुरुङको छायांकन रहेको छ । यस्तै भिडियोमा सुवास गुरुङले ड्रोन चलाएका छन् । भिडियोको निर्देशन तथा सम्पादन गर्ने काम करण गुरुङले गरेका हुन् । हेर्नुस भिडियो :
Previous Postमिस चब्बीको ताज रविनालाई Next Postसुन्दर–मेलिनाको यस्तो छ ‘मास्टर प्लान’ (भिडियोसहित)